छोराछोरीको साथमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रोकिएन हासो, सुनाए सुमधुर गीत ! (भिडियो सहित)
मदनकृष्ण श्रेष्ठ नेपाली हास्यब्यङ्य जगतका पर्याय भन्दा फरक नपर्ला । मह जोडीका रुपमा झनै चर्चित मदनकृष्ण श्रेष्ठका आफ्नै जीवन भोगाई छन । उनको जीवन भोगाई सुन्दा, पढ्दा आखाबाट आँसु नै आउँछ । कलाकार श्रेष्ठको जन्म वि.सं. २००७ साल वैशाख ७ गते काठमाडौंमा भएको हो। उनी रामकृष्णलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मीका एक्ला छोरा हुन्। त्यसो त अर्की आमाका तर्फबाट भाइ र दुई बहिनी छन्। उनका भाइ नीरव श्रेष्ठ अमेरिकामा नै छन्। बहिनीहरू साधना र सविनाचाहिं यतै छन्। उनै हास्यव्यंग्य जगतका मदनकृष्ण आज आफ्नो छोरा र छोरीको साथ एकैसाथ मिडियामा देखिएका छन । कुराकानीका क्रममा छोराछोरीले सुमधुर स्वरमा गीतहरु सुनाए ।